Fomba 6 ambony hamahana ny raharaham-barotra: torolàlana ho an'ny mpandraharaha. 0000
Fomba 6 ambony hamahana ny raharaham-barotra: torolàlana ho an'ny mpandraharaha.
Leave a Comment / mpiaro, Blog / By Sarah
Fomba 6 lehibe hamahana ny raharaham-barotra ho an'ny mpandraharaha
Ny raharaham-barotra sy ny fiaraha-miasa dia mety hanjary mangidy amin'ny fotoana rehetra noho ny fanitsakitsahana ny fifanarahana (fantatra amin'ny hoe fampanantenany tapaka na tsy nahomby). Ary mety hiteraka raharaham-pitsarana na fifanolanana amin'ny fifanarahana fifanarahana izany. Ato amin'ity lahatsoratra ity, ndao isika hahatakatra ireo fomba 6 handaminana ny raharaham-barotra.
Betsaka ny hevitra momba ny sehatry ny fiaraha-miasa ao Dubai hoavin'ny birao, na dia mbola eo am-piandohana aza ny fiaraha-miasa. Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny hatsaran'ny vokatra mifandraika amin'ny famokarana sy ny fanavaozana.
Miaraka amin'ny fahasahiranana ara-toekarena ankehitriny sy ny tsy fahazoana antoka amin'ny ho avy, mpandraharaha maro no mimenomenona ny trosany tsy azo antoka. Mba handaminana ny trosany dia tsy maintsy mandalo fitsarana izy ireo ary miatrika ady ara-dalàna. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba hamahana ny raharaham-barotra izahay. Hifantoka amin'ny fizotry ny raharaham-pitsarana sy ny fomba hamahana izany amin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpisolovava izahay. Hodinihintsika koa ny fomba ahafahan'ny olona mamantatra mpisolovava mety afaka manampy amin'ny famaritana ny raharaham-barotra.
Inona no atao hoe Litigation Commercial?
Ny raharaham-barotra no vahaolana araraotin'ny orinasa iray manohitra ny iray hafa. Amin'izany no anaovana fitsarana ary omena fitsarana ho an'ny antoko mandresy. Ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa amin'ny ankapobeny dia misy fampanantenany hanolotra serivisy na vokatra ho takalon'ny vola na fiheverana mitovy amin'izany. Rehefa tsy mitana ny fampanantenany ny roa tonta dia mety hampihatra ilay fifanarahana na fifanarahana ny roa tonta famenoana fitoriana ny sivily.
Hatramin'izao, ny fitsarana raharaham-barotra dia mbola fomba fanao voalohany amin'ny famahana ny fifanolanana sarobidy be any UAE.
Ny fitsarana raharaham-barotra dia mijanona ho fomba voalohany hamahana ny fifanolanana sarobidy sy sarotra any UAE.
Olana lehibe hodinihina alohan'ny hitondrana hetsika ho an'ny raharaham-barotra
Ny antoko mitady hetsika ara-dalàna dia tsy maintsy mandinika ireto toe-javatra manaraka ireto:
a. Fahaiza-miaina ara-toekarena an'ny voampanga,
b. Likelihood an'ny voampanga tsy handeha na handositra.
Azon'ny antoko atao ny mametraka fangatahana fampidirana am-pitandremana any amin'ny tribonaly mba hahazoana antoka fa tsy hiparitaka na hofoanan'ny voampanga ny fananana.
Inona avy ireo fomba handaminana ny raharaham-barotra?
Mandehana am-pitandremana ireo fepetra ireo
Alohan'ny hanaovana sonia fifanarahana rehetra dia tokony hamaky azy tsara foana ianao. Ary raha misy ny fifanolanana dia avereno indray ilay fifanarahana, ary am-pitandremana kokoa ity indray mitoraka ity. Tadiavo ireo andalana na fizarana manokana izay mamaritra ny momba anao -
Misy ifandraisany amin'ny adinao izany. Ary raha nahatanteraka ny adidy ianao sy ny mpifanaraka aminao.
Ny fomba tokony harahinao amin'ny toe-javatra toy izany na eo am-pamahana ny disadisao.
Andalana famaranana izay mety hilaza aminao ny fomba famaranana io fifandraisana fifanarahana io raha tokony manapa-kevitra ny hanao izany ianao.
Tsara kokoa hatrany ny mifampiraharaha amin'ny mpifanaraka aminao alohan'ny handraisanao andraikitra ara-dalàna. Ianao dia mila manondro ireo faritra manokana izay eritreretinao fa nanao ratsy ny mpandraharaha ary manome fotoana hamaliana izany. Ny maro amin'ireo fifandirana dia noho ny tsy fifankahazoan-kevitra sy ny tsy fahazoan-kevitra fotsiny. Mifanakaloza hevitra amin'ny mpandraharaha momba ny hetsika fanasitranana izay tokony hatao mba hanara-dalàna ny toe-javatra sy hahitana izay valiny.
Azonao atao ihany koa ny mametraka ny fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny fampidirana mpisolovava amin'ny roa tonta. Io no fomba fototra hamahana ny tsy fitoviana. Fifandraisana etsy sy eroa miaraka amin'ny tanjona kendrena hikaroham-bahaolana ho an'ilay fifanolanana.
Tsy misy fomba na fitsipika manokana momba ny fifampiraharahana manaraka. Ny antoko rehetra dia afaka manapa-kevitra sy manomboka fifampiraharahana amin'ny fomba milamina. Ny fifampiraharahana dia atomboka amin'ny dingana rehetra: ie, alohan'ny fametrahana fitoriana, raha mbola eo am-panaovana ny raharaha, amin'ny fotoam-pitsarana, na alohan'ny na aorian'ny fametrahana ny fitoriana.
3. Mifandraisa amin'ny masoivoho fanjakana sy eo an-toerana
Betsaka ny masoivohon'ny mpandraharaha na vondrona varotra mitovy amin'izany no manana programa famahana adihevitra ankapobeny misy fifanarahana. Mety hitongilana kely amin'ny mpifanaraka izy ireo, saingy azo antoka fa hahaliana azy ireo ny fifanolanana rehetra misy amin'ireo mpikambana ao aminy. Rehefa dinihina tokoa, ny laza dia ilaina amin'ny orinasa. Ankoatr'izay, raha mahita fanampiana ianao ary mamaha ny fifanolanana dia azo antoka fa hampihena ny vidinao izany.
Ny fanelanelanana dia tsy inona fa endrika fifampiraharahana ara-dalàna sy voarindra. Izy io dia manara-maso ny antoko fahatelo na ny tsy miankina antsoina hoe mpanelanelana. Ity no dingana manaraka raha tsy mahatratra fifanarahana ianao. Ny mpanelanelana dia manampy amin'ny famantaran-javatra amin'ny lafiny roa, satria manana fomba fijery vaovao momba ny fifanolanana izy. Mety hanampy amin'ny famahana ny olana izany ary amin'ny fifanarahana mahafapo. Amin'ny ankapobeny ny mpanelanelana dia mpitsara na mpisolovava zokiolona.
Manampy ity dingana ity amin'ny fanaovana izay hahitan'ny roa tonta ny fomba fijerin'ny tsirairay. Dingana tsy mamatotra izany; Izy io dia azo fehezina ihany rehefa mifanaiky ny roa tonta ary mametraka fehezanteny an-tsoratra, ary manao sonia azy.
Karazana adihevitra izay mahasoa ny fanelanelanana dia -
Mpanofa trano sy tompon-trano
Ady ara-pianakaviana toy ny fitaizana zaza na fisaraham-panambadiana
Olana amin'ny raharaham-barotra
Ny olana mety
Mpiasa sy mpampiasa
Mpivarotra sy mpanjifa
Ny dingana manaraka amin'ny fanelanelanana. Amin'ny fanelanelanana dia eo an-tanan'ny roa tonta ny fifehezana, fa amin'ny fifampiraharahana kosa dia mankany amin'ny antoko fahatelo ny fahefana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra farany.
Ny arbitration, miaraka amin'ny fifampiraharahana sy ny fanelanelanana, dia ampahany amin'ny fizotran'ny vahaolana amin'ny fifanolanana (ADR). Ity dingana ity dia mazàna tafiditra amin'ny toe-javatra toy izany, izay efa lany ny fahafahan'ny antoko mifampiraharaha.
Matetika ny fifanarahana dia misy ny andininy arbitration, indrindra amin'ny fangatahana kaonty mpivarotra stock, kaonty fisotroan-dronono na carte de crédit. Amin'ity dingana ity dia misolo tena ny roa tonta ny mpisolovava. Ny arbitrator dia mihaino ny andaniny roa, mandinika ny antontan-taratasiny, ny fijoroana vavolombelona, ​​ny porofo ary avy eo manapa-kevitra. Ny fizotrany dia mitovy amin'ny fitsarana, saingy amin'ny zony manintona ihany.
Tsy voafatotra io fizotran-javatra io fa raha samy manaiky ny roa tonta dia mety ho dingana mamatotra izany. Ity dia heverina ho dingana manakiana noho ny fepetra takina amin'ny fampanoavana amin'ny ankamaroan'ny toerana. Ny olona tokan-tena dia afaka manatanteraka ny fizotrany na tontonana misy telo ary atao ao amin'ny efitrano fivoriana na birao fihainoana.
Ny iray amin'ireo tranga mahazatra indrindra mipetraka amin'ny raharaham-pitsarana dia ny fanitsakitsahana ny fifanarahana. Amin'ity dingana ity dia tena zava-dehibe ny mpisolovava. Ny fahamarinana sy ny rafitra sivily ary ny fitsarana dia ampiasaina amin'ity dingana ity hamahana ny fifanolanana ara-dalàna. Ity dingana ity dia afaka manery ny lafiny mifanohitra handray anjara amin'ny vahaolana.
Ny fanapaha-kevitra dia araky ny lalàna sy ny fampiharana ny zava-misy aseho. Ny didim-pitsarana farany dia mamarana ny fizotry ny raharaham-pitsarana ary hampiharina ny fanapaha-kevitra. Na izany aza, ny antoko resy dia afaka miakatra amin'ny fitsarana ambony.
Ny famahana olana dia mora tokoa amin'ny dingana voalohany, izay tsotra tahaka ny resaka. Saingy rehefa mihamafy ny fandehan-javatra dia tsy maintsy ataonao ara-dalàna ny zava-drehetra.